ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အလှူရှင်များအားလုံးနှင့် မြန်မာပြည်သူများ အားလုံးသိစေရန် ~ ဒီမိုဝေယံ
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အလှူရှင်များအားလုံးနှင့် မြန်မာပြည်သူများ အားလုံးသိစေရန်
အလှူရှင်များအားလုံးနှင့် မြန်မာပြည်သူများ အားလုံးသိစေရန်
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော “သုခ”ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ မျက်စိကုသခွဲစိတ်ခန်း တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာပြည်သူများထံမှ ပထမအကြိမ်အဖြစ် မြန်မာကျပ်ငွေ ငါးဆယ့်ခုနှစ်သိန်း၊ ခုနှစ်သောင်း၊ ငါးထောင် (၅၇,၇၅,၀၀၀ိ/) နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးရာ (USD500) ကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ရက်နေ့ က ဦးကျော်သူထံသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အလှူရှင်များအားလုံးနှင့် မြန်မာပြည်သူများအားလုံးထံ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
(၁) ဦးစန္ဒိမာ (+၈၁) ၉၀ ၈၅၁၈ ၉၁၃၈
(၂) ဦးသြဘာသ (+၈၁) ၈၀ ၄၁၇၁ ၉၃၃၃
(၃) The Bliss Foundation (+၈၁) ၈၀ ၄၁၃၃ ၃၁၂၈
ဆက်လက် လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ လိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှ လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ တာဝန်ယူလက်ခံ၍ လှူဒါန်းငွေများကို ရန်ကုန်ရှိ FFSS ရုံးသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ပေးပါမည်။ ပစ္စည်းတိုက်ရိုက် လှူဒါန်းလိုသူများအတွက် ရန်ကုန် FFSS ရုံးနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး သီးခြားစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
(၁) ဦးစန္ဒိမာ (Ph: 090 8518 9138, email: vcdma2006@gmail.com)
(၂) ဦးသြဘာသ (Ph: 080 4171 9333, email: mcwanmtba@gmail.com)
(၃) The Bliss Foundation (Ph: 080 4133 3128, email: vimuttisukha@gmail.com)
(1) BANK NAME = SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
BRANCH NAME = SUGAMO BRANCH
BANK' S ADDRESS = 2-11-1, Sugamo Toshima-ku,Tokyo, Japan,
BANK CODE = SMBC JP JT
(=BIC CODE)=SWIFT CODE)
A/C NO. = 693 - 7194250
(2) BANK NAME = JP POSTOFFICE BANK (ゆうちょ銀行）
BRANCH NAME = TAKADANOBABA BRANCH
A/C NO. = 10050 - 8246721
ငွေမလွှဲမီနှင့် ငွေလွှဲပြီးချိန်တွင် ဖုန်း (သို့) အီးမေးလ်ပို့၍ အသိပေးအကြောင်းကြားပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။